Lose Weight in 30 Days 1.0.33 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.0.33 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
Application မ်ား က်န္းမာေရး & ႀကံ႕ခိုင္ေရး Lose Weight in 30 Days
Lose Weight in 30 Days ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
2017 App ကို၏★အကောင်းဆုံး★
★အကောင်းဆုံးက Hidden ကျောက်မျက်ရတနာ App ကို★
★အကောင်းဆုံး Daily သတင်းစာကူညီ App ကို★
အသက် 30 နေ့ရက်များအတွက်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးသငျသညျအစာရှောငျနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံလမ်းအတွက်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့စီစဉ်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်။ မသာပါကစနစ်တကျလေ့ကျင့်ခန်းရှိသည်, ဒါပေမယ့်လည်းသင့်ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းမှာ အစားအသောက်အစီအစဉ်ကို ကိုထောက်ပံ့ပေးပါဘူး။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးလာအောင်ကူညီပေးပါ သိပ္ပံနည်းကျသက်သေပြ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ကယ်လိုရီဒေတာ Google ကြံ့ခိုင်မှု အပေါ်ညှိနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ program နဲ့ကပ်, နှင့်သင်သိမီသငျ့ကိုယျခန်ဓာအစဉ်အဆက်ထက် ပို. လှပသောဖြစ်လိမ့်မည်။
အဆိုပါလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်ကိုသင်သည်သင်၏အပိုကိုယ်အလေးချိန်နှင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ပုံဖော်ကူညီရန်လက်မောင်း, တင်းပါး, ဝမ်းဗိုက်နှင့်ခြေထောက်လေ့ကျင့်ခန်းပါရှိသည်။ Animation နဲ့ဗီဒီယိုကလမ်းညွှန်မှုနှင့်အတူ, သင်တိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းအတွင်းမှာညာဘက်ပုံစံကိုအသုံးပြုရန်သေချာစေနိုင်သည်။ အဲဒီမှာလိုအပ်မျှပစ္စည်းကိရိယာများရဲ့, ဒါကြောင့်သင်အလွယ်တကူအိမ်မှာသို့မဟုတ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုမည်သည့်အချိန်တွင်သင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျဂရပ်များ၌သင်တို့၏ကိုယ်အလေးချိန်တိုးတက်မှုကိုခြေရာခံများနှင့်ရှင်းလင်းစွာသင့်ရဲ့ကယ်လိုရီရေတွက်လို့ရပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်း Self-အားပေးမှုများအတွက်ပစ်မှတ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ လေ့ကျင့်ခန်းပြင်းထန်မှု step-by-ခြေလှမ်းတိုးပွါးပြီးကတည်းက, သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိန်းညှိနိုင်အောင်တိုင်းသုံးရက်တစ်ချိုးယူဖို့မေ့လျော့ကြပါဘူး။
- Track ကယ်လိုရီကိုမီးရှို့
- Animation နဲ့ဗီဒီယိုလမ်းညွှန်မှု
ကြံ့ခိုင်ရေး app များကိုရှာဖွေနေပါသလား အစာရှောင်ခြင်းကိုယ်အလေးချိန်လိုပါသလား? အဘယ်သူမျှမကျေနပ်ကိုယ်အလေးချိန် app များကို? သငျသညျအစာရှောငျကိုယ်အလေးချိန်ကိုကူညီနိုငျရက်ပေါင်း 30 အတွင်းအလေးချိန်ရှုံးသည်။ ယလေ့ကျင့်ခန်းမှယခု 30 ရက်အတွင်းဆုံးရှုံးအလေးချိန်ကြိုးစားပါနှင့်အစာရှောင်ခြင်းကိုယ်အလေးချိန်။ ဒါဟာအစတစ်ကအကောင်းဆုံးအစားအသောက်အစီအစဉ်ကိုယ်အလေးချိန် apps များဖြစ်ပါတယ်။
မထိုက်မတန်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အိမ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အားကစား, အစားအသောက်နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အတူအလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့တစ်ရက်မိနစ်အနည်းငယ်ယူပါ။ လိုအပ်ဘယ်သူမျှမကပစ္စည်းကိရိယာများ, ပဲအိမ်မှာလေ့ကျင့်ခန်းရန်သင့် bodyweight ကိုအသုံးပြုပါ။
အမြိုးသမီးမြားအဘို့အအလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှု Apps ကပအခမဲ့
အလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့ခဲယဉ်း? ဒါဟာကြံ့ခိုင်ရေး apps များနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်မိန်းမတို့အဘို့အခမဲ့ apps ကျွမ်းကျင်သူများကဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်, သင်တို့သည်ငါတို့၏အစားအသောက်များတွင်အစီအစဉ်, ကြံ့ခိုင်ရေး apps များနှင့်အတူလုံခြုံပြီးအစာရှောင်ခြင်းကိုယ်အလေးချိန်နိုင်ပြီးကိုယ်အလေးချိန်မိန်းမတို့အဘို့အခမဲ့ apps ။
အမျိုးသမီးကြံ့ခိုင်မှု App ကို
မထိုက်မတန်အောင်ထားပါနှင့်အစားအသောက်အစီအစဉ်ကိုယ်အလေးချိန် apps များနှင့်အတူဗိုက်အဆီဆုံးရှုံး - မိန်းမတို့အဘို့လေ့ကျင့်ခန်း။ ဤသည်အမျိုးသမီးကြံ့ခိုင်မှု app ကိုအမြိုးသမီးမြားအဘို့အပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆုံးရှုံးဗိုက်အဆီယလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းရှိပါတယ်။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်အချိန်မရွေးဘယ်နေရာမှာမဆိုလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်မိန်းမတို့အဘို့ဗိုက်အဆီယလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းရှုံးသည်။
ဤသည်အမျိုးသမီးကြံ့ခိုင်မှု app ကိုဗိုက်အဆီမီးလောင်ရာလေ့ကျင့်ခန်း, အမျိုးသမီးယလေ့ကျင့်ခန်း, အမျိုးသမီးများအတွက်လေ့ကျင့်ခန်း, core ကိုယလေ့ကျင့်ခန်းရှိပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းကိုမီးရှို့ဤရွေ့ကားဗိုက်အဆီ, အမျိုးသမီးယလေ့ကျင့်ခန်း, အမျိုးသမီးများနှင့်အဓိကလေ့ကျင့်ခန်းများအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းကသင်၏ခန္ဓာကိုယ် Tone ကိုကူညီသက်သေပြခဲ့သည်။ အမြိုးသမီးမြားအတှကျကြှနျုပျတို့၏အမျိုးသမီးယလေ့ကျင့်ခန်း, core ကိုယလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့ချွေး!
အဆီမီးရှို့ခံရသောလေ့ကျင့်ခန်း & Hiit ယလေ့ကျင့်ခန်း
အကောင်းဆုံးအစားအသောက်အစီအစဉ်ကိုယ်အလေးချိန် apps များ, အဆီမီးလောင်ရာလေ့ကျင့်ခန်း & hiit လေ့ကျင့်ခန်းပိုကောင်းခန္ဓာကိုယ်ပုံသဏ္ဍာန်သည်။ အဆီမီးလောင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အတူကယ်လိုရီ Burn, နှင့်အကောင်းဆုံးရလဒ်များကိုရရှိရန် hiit လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အတူပေါင်းစပ်။
အားလုံးအားကစား & လေ့ကျင့်ခန်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြံ့ခိုင်ရေးနည်းပြများကဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ ကိုယ့်အိတ်ထဲအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြံ့ခိုင်ရေးနည်းပြရှိခြင်းကဲ့သို့သောအားကစား & လေ့ကျင့်ခန်းမှတဆင့်လေ့ကျင့်ခန်းလမ်းညွှန်,!
Lose Weight in 30 Days အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Lose Weight in 30 Days အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Lose Weight in 30 Days အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Lose Weight in 30 Days အား အခ်က္ျပပါ
my12345 စတိုး 402 414.86k
Lose Weight in 30 Days ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Lose Weight in 30 Days အခ်က္အလက္
Lose Weight in 30 Days APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ